Diyaar Garow Intaadan Dalbalin Amaah Ganacsi - Amjambo Africa
Iyadoo kuxiran sida ganacsi loo diyaariyey, Codsashada amaahda ganacsigu waxay noqon kartaa hawl adag ama mid siman, iyadoo kuxiran sida ganacsade ganacsi u diyaar garoobay. Iyo sababta oo ah lacagta ay leeyihiin barnaamijyada amaahda qaarkood way xadidan yihiin, oo dhaqso ayey ku dhammaan karaan, sida ugu dhakhsaha badan milkiilaha meheraddu wuxuu ururin karaa waraaqaha loo baahan yahay si loo dalbado, sida ugu dhakhsaha badan waxay u heli karaan jawaab ah inay amaah ku guuleysan karaan iyo in kale. Sidoo kale, markii ganacsi la diyaariyo, amaahiyuhu wuu yeelan doonaa sawir cad oo ku saabsan dhaqaalaha ganacsiga bilowga hawsha, tanina waxay gaabin kartaa nidaamka dalabka. Hoos waxaa ku taxan dukumintiyada ugu badan ee amaahiyuhu u baahan karo, oo ku wanaagsan in had iyo jeer gacanta lagu haysto.
Xasiloonida iyo taariikhda ganacsiga waxaa lagu arki karaa iyadoo la ururinayo bayaannada ganacsiga ee bangiga. Macluumaadkan sidoo kale wuxuu muujinayaa sida lacagta loo isticmaalay, taas oo muhiim u noqon karta barnaamijyada amaahda qaarkood
Caadi ahayn, saddex sano oo canshuur celin federaal ah ayaa la codsadaa. Si kastaba ha noqotay, haddii meheraddu aysan shaqeyn muddadaas dheer, soo-celinta yar ayaa loo baahan doonaa.
Qoraalka Maaliyada ee Shakhsiyeed document
Dukumintigani wuxuu soo koobayaa hantida iyo deymaha qofka dalbanaya amaahda ganacsiga. Hantida waa waxa codsaduhu leeyahay, tusaale ahaan gaari, ama dhul. Deymuhu waa kharashyo ama deyn uu codsaduhu ku yeelan karo lacag, tusaale ahaan, amaah guri. Dakhliga codsadaha waxaa lagu xisaabtamayaa qoraalka maaliyadeed ee shaqsiyeed. Hantida, deymaha, iyo qiimaha saafiga ee codsadaha ayaa dhammaantood lagu tixgeliyaa nidaamka oggolaanshaha amaahda.
Tani waa soo koobitaan dakhliga shirkadda iyo kharashyada ku baxa ganacsiga. Bayaanka faa iidada iyo qasaaraha wuxuu ka tarjumayaa hadii ganacsigu abuuri karo faa iidada iyadoo la kordhinayo dakhliga iyo ama la dhimayo kharashyada.
Xaashida wax lagu qoro waxay muujineysaa sida dhaqaalaha shirkadu u socoto taariikh cayiman. Waxay soo sheegaysaa dhammaan hantida, deymaha, iyo saamileyda saamileyda ah. Saamiyada saamileyda waa qadarka lacagta ee milkiilaha shirkada maalgashadeen ganacsiga.
Fursadaha ganacsiga waxay muujinayaan deyn bixiyey sida ganacsiga ku dhisan yahay. Tusaale ahaan, ganacsigu wuxuu noqon karaa LLC, S-Corp, shirkad gaar loo leeyahay, ama urur aan faa’iido doon ahayn. Kuwani dhammaantood waa siyaabo kala duwan oo dawladdu u aqoonsan tahay ganacsi. Waxa jira xeerar kala duwan oo mid walba hor yaal.
Xisaabiyeyaasha ama xisaabiyeyaashu waa aqoonyahanno si wada jir ah u soo jiidaya noocyadan dukumiinti si ay uga caawiyaan shirkadaha inay codsadaan amaahda ganacsiga. Haddii kale, waxaa jira baakado software iyo degello internet oo ganacsatadu bixin karaan si loo soo saaro dukumiintiyada amaahda lagama maarmaanka ah. Badanaa, waxaa jiri doona ururo bulsho oo caawiya ganacsiyada yaryar ee doonaya inay codsadaan amaah ganacsi.
Markaad codsaneysid, hubi inaad weydiisato liistada hubinta dhammaan dukumiintiyada amaahiyaha ama barnaamijku u baahan yahay inuu ka shaqeeyo amaahda. Maskaxda ku hay in alaabooyin dheeri ah la dalban karo inta lagu jiro howsha amaahda. Weydii wixii waqtiyada kama dambaysta ah ee deyn bixiyuhu u haysto waraaqaha la soo dhiibo, oo u go’an muddadaas loo qabtay. Haddii ay tahay inaad dhaafto waqtiga kama dambaysta ah, horay u sii fiiri taas, oo la hadal deyn bixiyaha. Dhammaan waraaqaha habeysnaado oo ha xafidnaadaan – kuwani waa dukumiintiyo gaar loo leeyahay oo lala wadaagayo ilaha lagu kalsoon yahay oo keliya.
Diyaargaraw yar oo hormaris ah, milkiilayaasha ganacsigu waxay ku raaxeysan karaan khibrad siman markay dalbanayaan amaah ganacsi. Kaliya macluumaadka ma muujinayo sawir dhameystiran oo ku saabsan dhaqaalaha shirkadeed deyn bixiyaha, laakiin ganacsigu wuxuu u imaan doonaa faham cad oo ku saabsan caafimaadkooda dhaqaale sidoo kale.
PreviousOk Lacag lagu keydsanayo caymiska
NextRe Sharciga Soo Noolaynta Makhaayada